Minisitra Brunelle Razafitsiandraofa : Tsy mahafehy ny minisitera tantaniny -
AccueilRaharaham-pirenenaMinisitra Brunelle Razafitsiandraofa : Tsy mahafehy ny minisitera tantaniny
« Mipingapinga toa ny akohokely nahita rehoka ». Nindramina kely ity oha-pitenenana iray ity hoenti-manambara ny tsy fahafehezana ny andraikitra sahanina. Izany indrindra mantsy no zava-misy ankehitriny eo anivon’ny minisiteran’ny Fizahantany.
Tsy voafehin’ny minisitra Brunelle Razafitsiandraofa akory mantsy ity minisitera tantaniny ity. Raha toa ka nanatanteraka atrikasa eo amin’ny tontolon’ny fizahantany ny teo anivon’izany minisitera izany omaly, ka tonga nanokatra azy ity minisitra vaovao avy amin’ny antoko Mapar ity, tsy nisy zava-pantany akory tamin’izany, ary voatery nanatrika sy nanampy azy tamin’izany indray ny minisitra teo aloha, Roland Ratsiraka.
Tsy araka ilay fitatatatana sy fizahozahoan’ingahy minisitra Brunelle Razafitsiandraofa teny amin’ny Parvis-n’ny Lapan’ny Tanàna Analakely tokoa no hitany teny anivon’ny minisitera tantaniny. Mitaky fahaiza-manao sy fahalalana miaraka amin’ny traikefa ananana eo amin’ny tontolon’ny fizahantany mantsy ny fitantanana io minisitera iray izay anisan’ny hifotoran’ny toekarem-pirenena io. Izany hoe, minisitera anisany miavaka sy saro-pady ity tantanin’ny depioten’i Madagasikara lasa minisitra ity.
Ankoatra izay, fanovana hatrany no noventesin’ity minisitra vaovao ity fony izy mbola niaraka tamin’ireo depiote 73 tetsy Analakely. Hatreto anefa, tsy hita taratra izany fitondrana fanovana eo anivon’ny minisiteran’ny Fizahantany izany satria tsy voafehiny ilay taranja. Mbola nanamafy ihany koa anefa ny minisitra Brunelle Razafitsiandraofa fa hamaha ny olana mianjady amin’ireo mpandraharaha eo amin’ny tontolon’ny fizahantany noho ny tsy fandriam-pahalemana. Mahagaga ihany anefa ilay fanambarany mahakasika ny atrikasa hametrahana ilay paikady hanafoanana ny tsy fandriam-pahalemana mianjady amin’ireo mpizahatany sy ireo mpandraharaha, satria dia atrikasa iraisan’ireo minisitera maromaro anjara izany ka tafiditra ao anatiny ny minisiteran’ny Varotra sy ny minisiteran’ny Fambolena sy Fiompiana. Tsy misy tokony hidiran’ireto minisitera roa ireto mihitsy anefa izany. Mibaribary, araka izany, ny tsy fahaizana sy tsy fahafehezana ny minisitera tantanin’ingahy minisitra Brunelle Razafitsiandraofa.
Nanaitra sady nanafintohina ny maro, indrindra ireo ray aman-dreny mampiana-janaka no nahita ny horonantsary naparitaka olona iray tao amin’ny tambazotra serasera “facebook” mahakasika ilay mpampianatra eny anivon’ny sekoly tsy miankina “La Croyance” eny Anjanahary nikasi-tanana ...Tohiny